Ahoana ny fiterahan'ny soavaly? ? Jereo! | Noti Soavaly
Ao anatin'ny tontolon'ny soavaly dia ahitantsika endrika sy fiovana maro izay mety hahaliana antsika rehetra izay tia an'io biby mahafinaritra io. Ny fananana soavaly dia tsy midika fotsiny hoe mandeha, mitaingina sns, fa misy ihany koa ny fahafaha-manao hafa toy ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena (hazakaza-tsoavaly na mpitaingina soavaly), fifaninanana izay manome lanja ny endrik'izy ireo ary zavatra tena manintona: ny brood.
Betsaka ny fialamboly no maniry ny hahazo zanaka amin'ny soavaliny. Hiaina ny fizotry ny fitondrana vohoka, ny fahaterahana ary ny fikolokoloana tanora foal. Saingy, tokony homarihina fa ity Tsy asa tsotra io. Ilaina ny fananana fahalalana marobe ary ahazoana andiana fianarana hampiasaina mba hahazoana traikefa izay tena ilaina tokoa, indrindra raha mikasa ny hanohy ny fiompiana soavaly hatrany amin'ny fahafaha-manao isika. hampiofana ny soavalintsika na ny omby.
Ilaina, saika matetika, ny mitodika any amin'ny matihanina na olona iray hanoro hevitra antsika tsara momba ireo olana ireo, mba hialana amin'ireo olana marobe. Na izany aza, eto ambany izahay dia hanandrana hitari-dalana anao amin'ny fanomezana andiana atiny mahaliana sy fampahalalana mahaliana anao hahafinaritra kokoa ity fitsangatsanganana an-tsoavaly ity.
1 Rahoviana no miteraka ny soavaly?
2 Bevohoka amin'ny soavaly
3 Fikarakarana foal
4 Raha fintinina, ahoana no hataon'ny soavaly?
Rahoviana no miteraka ny soavaly?
Ny vanim-potoana mety indrindra amin'ny fahaterahan'ny soavaly tanora dia lohataona, toy ny mitranga amin'ny karazam-biby maro hafa, indrindra amin'ireo rehetra izay ao anatin'ny vondrona biby mampinono. Ny antony na ny antony dia satria amin'izao fotoana izao ny sakafo dia mazàna be kokoa ary ny toetr'andro tsy dia matetika loatra fa somary malefaka kokoa, miaraka amina ora antoandro izay mitana andraikitra lehibe.
Ny fitomboan'ny hazavana dia mandrisika ny antsoina hoe "Ivotoerana mandray" miorina ao amin'ny ati-doha izay tompon'andraikitra amin'ny fanombohana ny famokarana hormonina, ao anatin'izany ny firaisana.
Fetsy kely, izay ampiasain'ny mpiompy biby fiompy hafa, mampiasa ornithologists ho ohatra manome hazavana artifisialy ao am-bala na toerana fiompiana. Ity teknika ity dia mahatonga ny famantaranandro biolojian'ny soavalintsika hanomboka ary amin'izay isika afaka mandroso ny vanim-potoana fiterahana.
Matetika ny fahamatorana ara-nofo amin'ireto equines ireto dia manodidina ny telo taona. Amin'ny tranga tsy fahita firy dia misy ny tranga izay ahitana zazavavy na zanak'ondry tsy niteraka afa-tsy valo ambin'ny folo volana monja, saingy manindry mafy aho fa zavatra miavaka io ary matetika tsy matetika no mitranga izany.
Ny fotoana mety indrindra hahaterahan'ny foal dia eo anelanelan'ny volana Mey sy Jona.
Bevohoka amin'ny soavaly
Ny vanim-potoana fiterahana, amin'ny ankapobeny, dia momba 11 volana, manodidina ny 340 andro. Saingy, toy ny amin'ny zavatra maro hafa, tsy lalàna dogmatika izany. Misy ny fitondrana vohoka amin'ny vady izay nivelatra tsara ilay foal ary teraka tamin'ny faran'ny folo volana voalohany, mitaky fitandremana manokana. Mifanohitra amin'izany no izy, misy ny toe-javatra naharitra naharitra hatramin'ny taona, matetika rehefa lahy ny zaza.
Ny zava-misy mahaliana dia ny mahazatra ny fahaterahan'ny mares amin'ny alina dia matetika amin'ny alina no mitranga. Fanaterana hoy aza mihoatra ny dimy ambin'ny folo minitra. Na dia tokony homarihina aza fa raha mahita na mahatsapa karazana loza ny reniny dia afaka manelingelina ny fiterahana izy.
Mandritra ny fitondrana vohoka dia ilaina ny mitandrina fitandremana maro. Zava-dehibe ny milaza fa ny fampandrosoana ny tanora dia mitranga ao anaty tranon-jaza mandritra ny telo volana farany fitondrana vohoka. Noho izany, amin'ny enim-bolana voalohany amin'ny fitondrana vohoka dia azo saronana tsy misy olana ny mares, fa manomboka izao dia mety hanjary loza mitatao izay mety hiteraka fahafatesan'ny tovolahy.
Ilaina tokoa ny sakafo, ary vao mainka ilaina mandritra ny fitondrana vohoka. Ny fanomezana sakafo matanjaka sy isan-karazany ny soavalintsika, anisan'izany ny famenon-tsakafo proteinina.
Torohevitra iray ho an'ireo mpiompy rehetra izay ny biby dia tsy eny amin'ny habakabaka, fa mijanona ao amin'ny tranon'omby sy toerana kely mandritra ny andro. FANAZARAN-TENA. Ny fandehanana an-tongotra fohy, ary na dia amin'ny jogging maivana aza, mankany amin'ireo vadintsika bevohoka dia fomba fanao tena tsara.
Raha tiantsika hitombo sy ho salama ny zanatsika, dia ilaina ny manana andian-kevitra fototra momba ny fihetsik'izy ireo, ny fahazaran-tsakafo, sns.
Ny iray amin'ireo sary izay mahavoa antsika indrindra amin'ny soavaly tanora dia ny tongony lava. Ny amboahaolo vao teraka dia manana rantsana lava, mamela azy io mitsangàna adiny iray monja aorian'ny nahaterahanao, ary mihazakazaka adiny roa aorian'io fotoana io.
Ireo tongotra lava ireo dia mandrara azy tsy hanatratra ny ahitra ao amin'ny tany ihany koa, izay midika fa, amin'ny tontolo voajanahary, ny ronono novokarin'ny renin'izy ireo dia tsy fihinana fotsiny. Ronono manankarena amin'ny proteinina manafaingana sy manatsara ny fitomboan'ny zaza. Ho fanampin'izay, ny ronono voalohany izay vokarin'ny soavaly dia antsoina "colostrum", izay misy antibody goavambe.
Ireo foals matetika izy ireo minono sy hanome sakafo isaky ny XNUMX minitra, eo ho eo. Raha mahatsikaritra ny tsy fanarahan-dalàna amin'ity fihetsika ity isika dia mety vokatry ny tsy fahatratran'ny alika ny nono vavy, na angamba tsy tsara kalita ny rononon'omby, izay mitarika amin'ny fandavana ny zanak'omby.
Raha vantany vao vita ny lactation ny foal, dia tsara ny manome sakafo matanjaka mba hanonerana izay tsy fahampiana amin'ny fivoarany. Soso-kevitra ny hanome azy karazana famenon-tsakafo, indrindra ny toetra maha-vitamina (vitamina A, D ary E indrindra).
El foitra zavatra mampiahiahy be ny mpiompy izany. Ny fikarakaranao, mandritra ny andro aorian'ny fiterahana, dia tena zava-dehibe. Raha toa ara-dalàna izany dia tsy ilaina ny mandray fepetra hafa ankoatry ny fanadiovana azy amin'ny vokatra famonoana otrikaretina. Fa raha hitantsika fa tsy tsara ny toe-javatra misy azy io, amin'ny tranga sasany dia làlan'ny fandosirana ho an'ny urine izany, aza mieritreritra indroa ary tokony handeha haingana any amin'ny vet ianao. Raha tsy izany dia mety hitranga ny loza voajanahary mahafaty.
Na eo aza ny fahatanorany, ny soavaly tanora dia biby mavitrika tokoa, koa raha hitantsika fa mandany ny fotoanany amin'ny torimaso ny zanatsika, dia mety noho izy malemy na marary.
Ny fiompiana soavaly dia mety ho traikefa tena mahafa-po sy manome valiny, raha toa ka mazava tsara momba ny zavatra sasany izay manampy antsika mandritra izany isika. Manantena izahay fa nanampy betsaka anao izahay ary afaka nanazava ny fisalasalana sasany mety hitranga amin'ity lohahevitra ity.
Raha fintinina, ahoana no hataon'ny soavaly?
Amin'ny soavaly, ny dingan'ny fiterahana dia manomboka amin'ny fahamaotiana, izay mitranga amin'ny vehivavy eo anelanelan'ny taona 15 sy 24 volana, raha eo amin'ny lahy kosa dia matetika izy dia miseho amin'ny vanim-potoana taloha kokoa satria eo anelanelan'ny 14 sy 18 volana, Ity fotoana ity dia tena zava-dehibe amin'ny soavaly satria ny fizotrany dia tsy mifantoka amin'ny fanambadiana fotsiny, fa ilaina ihany koa amin'ny fampandrosoana ara-pahasalamana sy ny fanatanterahana ny biby aorian'izany.
Saingy sarotra kokoa ny fizotrany satria ny famokarana artisanaly, fa tsy amin'ny fiterahana dia misy dingana izay ataon'ny soavaly sy ny soavaly ary ilaina hanatanterahana ny fanambadiana, hatramin'ny taloha tsy maintsy misy fotoana mampiaraka, izay milalao ny soavaly raha manjaka ny lahy mandra-pahatongan'ny fotoana iray dia mampiseho tanteraka ny fiterahana ny vavy ary amin'izay fotoana izay no misy ny fanambadiana.
Miankina amin'ny photoperiod ny tsingerin'ny estrous ao amin'ny mares, satria biby ny polystric amin'ny vanim-potoana. manana ny tsingerina isam-bolana maharitra 21 andro, manana hafanana maharitra 5 andro, noho izany dia tokony ho mailo be isika, raha miandry ny fiterahana amin'ny soavaly, na ny manam-pahaizana aza dia milaza fa ny fotoana mety indrindra hampiarahan'ny lehilahy azy dia eo anelanelan'ny 12 sy ny ' famantaranandro. 36 ora hatramin'ny nanombohan'ny hafanana satria io no fotoana ihetsiketsika ny soavalivavy ka avo ny vintana hahatongavan'ny bevohoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » fandikana » Ahoana ny fanabeazana soavaly?